Ngaba usebenza noMgcini zincwadi zobhaliso lweDomain okanye uMthengisi kwakhona? | Martech Zone
Ngaba usebenza noMgcini zincwadi zobhaliso lweDomain okanye uMthengisi kwakhona?
NgoLwesithathu, Meyi 13, 2015 NgoLwesine, Meyi 14, 2015 Douglas Karr
Ingcinga yosomashishini esoyika umphathi
Kuba sisebenza nabatyali mali kancinci, ngamanye amaxesha bayasicela ukuba senze eminye imisebenzi ngaphandle kwesiqhelo kwiarhente. Umtyalomali omnye esisebenza naye usiqesha ngamanye amaxesha ukuphatha ukuthengwa kwesizinda. Kusebenza kakuhle ukuba nenkampani yethutyana yokusingatha ezi nkqubo kuba zihlala zithetha-thethana kunye nezixa ezikhulu zemali ezihamba phakathi kwamaqela.
Inkqubo ilungile ngokuthe ngqo. Sisebenzisa iakhawunti yomntu wesithathu eqinisekisa ukuba siyifakile imali yelinye iqela emva koko sigunyazisa ukukhutshwa kwemali xa sifika ubunini begama lesizinda. Ukuba kukho nakuphi na ukungaboni ngasonye, ​​isivumelwano siya kungena kulamlo. Oku kuyeka ukurhweba ngokunganyaniseki ukuba kungenzeki.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, saxoxa ngokuthengwa kwesizinda kwiqela labucala. Idomeyini ibhalisiwe kunye Yahoo! Amashishini amancinci… Okanye sicinge njalo.
Sifake imali kwi-escrow emva koko kwaqala ubumnandi. Sincedisile elinye iqela ukuvula i-domain kunye nokugunyazisa ukutshintshelwa kwesizinda kubhalisi besizinda sabathengi bethu. Le yinkqubo elula ukuba uyazi ukuba wenzani, kuthatha ixesha ngokuxhomekeke kumbhalisi wesizinda.
Ndijonge zombini umthengi kunye neakhawunti yeqela labucala ngentsasa elandelayo kwaye akukho nto itshintshileyo. Ngosuku olulandelayo ndaphinda ndakhangela kwakhona kwaye ugqithiselo lwalukhona rhoxiswa. Nditsalele I party yabucala wathi akhonto ayenzileyo.
Ndamisela umnxeba wenkomfa saza sacofa iqela likaYahoo! Emva kokulinda ixesha elide, sadibana netekhnoloji yenkxaso eyathi asinakugqithisela i-domain ngaphandle, kodwa ukuba bendineYahoo! Iakhawunti yeShishini elincinci, sinokudlulisela isizinda kwiakhawunti siye kwiakhawunti.
Ukuba uthengile okanye wathengisa imimandla… Iindlebe zakho mhlawumbi zivele kule nto. Emva kwetoni yeengxoxo zokudluliswa kwesizinda, ICANN ilawula le nkqubo ukuqinisekisa ukuba unokudlulisa imimandla ngokulula ukusuka kubhalisi omnye uye komnye. Oku kwenzelwe ukuqinisekisa ukuba iinkampani zobhaliso lwesizinda azinakho ukubamba abathengi bazo.
Lo ngumbuzo endiwubuze kuYahoo! ummeli wenkxaso kodwa kubonakala ngathi akawuqondi umbono wombuzo ke saqhubeka nje. Nantsi ke xa iqala ukoyikisa.
Ndabhalisa i-Yahoo! Iakhawunti yeShishini elincinci kumthengi wam ngelixa usefowunini kunye nomntu wesithathu kunye neYahoo! ummeli. Ummeli emva koko uxelele umntu wesithathu ukuba arhoxise i-akhawunti yakhe ukuze idomain ikhululwe kwaye ndibhalise ngokukhawuleza i-domain ukuyifumana.
Intoni?! Ke siza kubeka le thambeka kwimarike okwexeshana kwaye emva koko siyibhalise kwakhona?! Kuthekani ukuba siphulukene nethambeka ngeloxesha kwisizinda esithile esibukhali phaya ngaphandle nenkqubo yokuthenga ezenzekelayo? (Andazi ukuba ikho nyani na, kodwa andikholwanga sisicelo). Ndambuza ummeli kwaye wandiqinisekisa ukuba uya kuba nolawulo kwi-domain.
Ke sitsalile i-trigger kwaye ndayibhalisa idomain ku-Yahoo! wam omtsha kraca kumxhasi wam Iakhawunti yeShishini elincinci.
Ngomhla kamva, kwaye i-domain yayisekho kwiakhawunti yomntu wesithathu kwaye yayi bonisa kum kodwa ingekadluliselwa ngokupheleleyo. Okwangoku, ndenze uphando kwaye Ukukhangelwa kwe-WHOIS ukubona ulwazi loluntu olunxulumene nesizinda. Ngokuqinisekileyo, yathi i-domain yayisabhalisiwe kunye nomntu wesithathu. Kodwa nantsi indawo engaqhelekanga… umbhalisi wedomeyini wayengeyiYahoo! Amashishini amancinci, bekunjalo IMelbourne IT e-Australia.
Ndabeka itikiti eMelbourne IT kwaye babhala emva kosuku emva koko ukuba babengumbhalisi wokwenene kwaye Yahoo! Amashishini amancinci ayengabathengisi kuphela. Arghhhhhh! Lonke elo xesha yayiyinkcitho.
Ke, saqala inkqubo yokudlulisa idomain eMelbourne IT. Ibali elifutshane elifutshane, zikwanayo nenkqubo edibeneyo apho ungashukumiyo khona isizinda kwi-akhawunti enye ukuya kwenye. Uhambisa umnini-akhawunti usuka komnye umntu uye komnye. Ndiyenzile nje loo nto kwaye ndihlawule enye imali (andazi ukuba ndihlawule ntoni kuYahoo! Amashishini amancinci).
Nazi iiveki ezimbalwa kamva kwaye ndiyakholelwa ukuba ekugqibeleni idomain iyadluliselwa. Isaziso sam samva sathi kungathatha ukuya kwiintsuku ezisi-7 ukugqitywa ukuze usinqwenelele ithamsanqa!
Eyona nto iphambili apha kukuba kufuneka ujonge apho ubhalisa khona indawo yakho. Inkqubo, ukunqongophala kwamaxwebhu, inkxaso yokungazi kunye nenkqubo endiyikholelwayo, eyaphula imigaqo ye-ICANN, yayiphazamisa kwaye ihlekisa. Andithandabuzi ukuba inkqubo ibinokuba lula kakhulu ukuba i-domain ibibhaliswe kumbhalisi endaweni yomthengisi.
Ngcono ngoku, ncamathela kwiGoDaddy. Ayizukuthintela le micimbi kuphela, uya kuchitha imali encinci kwaye ufumane inkonzo enkulu kubathengi.
tags: Thenga amagama ezizindaukuthenga amagama e-domaini-escrowyinyibilikiseniIsizinda se-melbourneyahooUmbhalisi wesizinda se-yahooimimandla ye-yahoo
Sukutyhola i-B2B (imeyile) yoMyalezo
Amava abaThengi asileleyo ayonakalisa ukuthengisa kwakho
Meyi 14, 2015 kwi-7: 54 AM
Ndisandula ukuqala iprojekthi apho ndihambisa khona umthengi ngokufanelekileyo kude neshishini elincinci le-Yahoo ukuya eGodaddy, ixesha elifanelekileyo. Umbuzo wam kufuneka nditsiba ukuzama ukuhamba nge-Yahoo amashishini amancinci kwaye ndithethe neMelbourne IT? Kwakhona, ucinga ukuba konke kuhamba kakuhle, ngaba kujongeka ngathi uya kuba nolawulo olupheleleyo lwesizinda kunye neMelbourne IT ngokupheleleyo ngaphandle komfanekiso? Ukucinga nje ukuba ngaba simele sishiye i-domain ebhaliswe apho, endaweni yokuthatha umngcipheko kunye nexesha elingenjalo.
Meyi 15, 2015 kwi-12: 53 AM
Molo Jon, ngokunyaniseka amava abesoyikeka (kwaye ujongano lweDomain yaseMelbourne alusebenzi nakwiChannel), ndiphume apho. Idomain idluliselwa (iwele iminwe) ngoku.
Meyi 17, 2015 kwi-4: 52 PM
Enkosi ngempendulo Doug! Ndijonge phambili ekuhlaziyweni koku. Ndijongane nomnye umthengi ngazo kwaye ndakhetha ukuzigcina apho ngenxa yobu bunzima. Okona kuncinci, ndiyathemba ukuba abantu bayayibona le posti yebhlog kwaye bakhethe ukungasiqali isiseko sabo ngeYahoo amashishini amancinci. Ndikholelwa ngokuqinileyo ekunikeni wonke umnini-shishini amandla okulawula iiasethi zabo. Amaxesha amaninzi abantu abade babubone ubuchwephesha bokuzibandakanya nenkampani eyenza into ekufuneka ibe lutyalo-mali, ilahleko, xa bekhetha ukufumana enye inkampani.
Feb 2, 2016 ngo-3: 59 AM
Ke mna, ndiyayithanda le nto Nguba ni u Kaninzi